Maqaallada ku saabsan Thailand
Shaqo Ka Raadinta Thailand? Waa tan waxa aad u baahan tahay !!
November 24, 2020 Shubham Sharma shaqo, Thailand
Shaqooyinka Thailand !! Thailand, oo ku taal qaybta koonfureed ee Aasiya, waxay leedahay waxyaabo badan oo caan ah. Thailand waxay caan ku tahay adduunka oo dhan meelaha dalxiiska. Marka laga reebo dalxiisyadan dalxiis, muwaadiniinta badankood waxay u yimaadeen Thailand shaqooyin. Ku
Sidee loo dalbadaa Visa Thailand?
September 13, 2020 Karuna Chandna Thailand, fiisada
Dowladda Boqortooyada Thailand ayaa soo bandhigtay nidaamka fiisaha. Waqtiga ay dalka yimaadeen. Visa Online-ka Visa waa oggolaansho elektaroonik ah oo loogu safro Thailand. Waxaa loogu talagalay ujeedooyin dalxiis. Sidoo kale, si
Meelo fiican oo lagu booqdo Bangkok iyo meelo kale oo Thailand ah
August 22, 2020 Antika Kumari Thailand, wax in la sameeyo, safarka
Dalxiiska ayaa gacan weyn ku leh Boqortooyada Thailand. Waa qayb ka mid ah Koonfur Bari Aasiya, halkaasoo aad ku leedahay Singapore iyo Thailand, oo ah waddamo leh dalxiis horumarsan oo horumarsan. Waxa kale oo aad leedahay dalal kaliya u furan dalxiisayaasha,
February 25, 2020 Maitri Jha dugsiga, Thailand, safarka
Ma qorsheyneysaa inaad u guurto Thailand adiga iyo qoyskaaga wax ka mid ah waxa had iyo jeer maskaxdaada ku jira waa iskuulka iyo nidaamka waxbarasho ee Thailand si loo hubiyo mustaqbalka wanaagsan ee carruurtaada. Marka loo eego siligga wareejinta, boqolkiiba aqriska
Ku baadho Thailand Hababka ugu Jaban ee Gaadiidka !!
October 15, 2019 Karuna Chandna soo qaado, Thailand, safarka
Gaadiid ku qaad Thailand: Tilmaamaha fudud ee lagu tagi karo Thailand !! Thailand waxay leedahay qaabab kaladuwan oo gaadiid kala duwan ah kuwaas oo u muuqda inay ku yimaadaan dhammaan qaabab iyo cabirro kala duwan. Qaababkan iyo cabirradani badanaa way ka duwan yihiin magaalooyinka yar yar iyo
Cisbitaalada ugu sareeya Thailand!
October 15, 2019 Karuna Chandna caafimaadka, Thailand
Badanaa waan bukoonnay intaanu safarnay. Guud ahaan isbedelka jawiga, dadaalka iyo helitaanka daryeel haboon ama jirka intiisa kale. Marka, waa inaan aqoon u leenahay cisbitaalada wanaagsan ee magaalada ama wadanka aan u safreyno. Halkan
Qorshaynta Safarka To Thailand Dhawaan? Booqo Goobahan Dalxiiska ee La Yaabka Leh !!
October 15, 2019 Karuna Chandna Thailand, safarka
Maxaa Thailand caan ku ah? A. Thailand waxay dunida caan ku tahay duugista xayawaanka, xeebaha, macbudyada Buddhist, nolosha habeenkii, iyo, dabcan, dukaamaysiga. Dalxiisayaasha dhalinyarada ah, Bangkok, Pattaya iyo Phuket waa janno ay ku raaxeystaan ​​habeenka raaxeysiga; halka kuwa dabiicada jecelna, jasiiradda
Ma waxaad qorsheyneysaa inaad u safarto Thailand? Ogow Waqtiga Ugu Fiican !!
October 14, 2019 Karuna Chandna Thailand, safarka
Waqtiga ugu Fiican ee Booqashada Thailand Thailand sidoo kale waxaa loo yaqaan Dhulka Dhoolacadeynta. GEMS ee Koonfur-bari Aasiya. Dadku aad bay ugu fiican yihiin wadanka wayna ku aqbali doonaan xubin qoys ahaan. Thailand waa mid ka mid ah
Dib u dejin mise Booqashada Thailand? Ma Dooneysaa Koonto Baan? Hubi Kuwaan !!
October 14, 2019 Karuna Chandna lacag, Thailand, safarka
Sidee Loogu Furaa Xisaab Bangi Thailand (Ajaanibta) !! Haddii aad u guureyso Thailand ama aad booqaneyso Thailand muddo dheer, waxaad dhawaan ogaan doontaa in helitaanka lacagtaadu ay kharash badan ku bixin karto
Safarka A Si Thailand? Waa Inay Fiirisaa Hoteellada Qiimaha Ugu Wanaagsan !!
Hoteelku waa meesha keliya ee adduunka ee shaqadiisa koowaad ay tahay inuu adiga ku daryeello, baahiyahaaga, rabitaankaaga iyo qanacsanaantaada 24ka saacadood maalintii. Xirfad kastaa waxay leedahay waajibaadkeeda, howsheeda iyo waxa ay ku dadaasho. The